10.10 Super Sale ~ The ICT.com.mm Blog
10.10 Super Sale မှာ ဘာတွေ သစ်လဲ?​ ဘာတွေ တန်လဲ? ဘာတွေ ဆန်းလဲ?​ လို့ မေးနေတဲ့ ICT.com.mm ချစ်ပရိတ်သက်ကြီးအတွက် ဒီလင့်လေးတွေကို နှိပ်ပြီး လေ့လာကြည့်ပါလို့။
ဒီလို နာမည်ကြီး Quality Branded ပစ္စည်းအသစ်တွေကို special discount နဲ့ ဝယ်လို့ ရတဲ့အပြင် email ဖြင့် rewards program ကို register လုပ်ပါက reward points တွေကိုလည်း နှစ်ဆတောင် ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့။ (Notes: Rewards point registration is only available on desktop browser.)
ဒါ့အပြင် #Visa #MasterCard #KBZPay, #WavePay, #CBPay, #Direct bank transfers to #KBZ, #AYA and #CB တို့ဖြင့်လည်း ပေးချေနိုင်ပြီး၊ ကဒ်မရှိလို့ ငွေသားဖြင့်ပ ပေးချေမယ်ဆိုရင်တော့ ၅% ကို ထပ်မံ စျေးလျော့ပေးမှာမို့လို့ ICT.com.mm မှာ စျေးဝယ်ထွက်တာ အကောင်းဆုံး၊ အတန်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်လို့
#ShopICT #Myanmar #doublepointsday #1010supersale #ICT #Octoberpromotion #1010 #supersale #TechSales
Older အိုင်စီတီမှာအမြဲဈေးဝယ်နေတဲ့ Customers တွေအတွက် ICT Rewards အစီအစဉ်